Colaadda Ukraine iyo Ruushka: Madaxweyne Biden “Putin wuxuu go’aansaday in uu weeraro Ukraine” – Bulsho News
Colaadda Ukraine iyo Ruushka: Madaxweyne Biden “Putin wuxuu go’aansaday in...
Colaadda Ukraine iyo Ruushka: Madaxweyne Biden "Putin wuxuu go'aansaday in uu weeraro Ukraine"
Colaadda Ukraine iyo Ruushka: Madaxweyne Biden “Putin wuxuu go’aansaday in uu weeraro Ukraine”
Madaxweyne Joe Biden
Biden wuxuu sheegay in qiimeynta lagu saleeyay sirdoonka Mareykanka oo soo jeediyay in magaalada caasimadda ah ee Kiev uu Ruushka beegsanayo.
Ruushka ayaa marar badan beeniyay in uu damacsanyahay in uu weeraro dalka ay deriska yihiin ee Ukraine.
Waddamada Reer Galbeedka ayaa ka cabsi qabaa in Ruushka uu isku dayo in uu qalalaaso been abuur ah uu ka huriyo gobollada dhaca bariga Ukraine si uu marmarsiinyo uga dhigto duullaanka.
Maraykanku waxa uu ku qiyaasay in 169,000-190,000 oo Ruush ah inay ku sugan yihiin gudaha iyo agagaarka Ukraine, tiradaas oo ay ku jiraan dagaalyahannada uu Ruushku taageero ee ka howlgala jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday gooni isu taageeda ee Donetsk iyo Luhansk ee bariga Ukraine.
Khudbad uu ka jeediyay Aqalka Cad, madaxweyne Biden wuxuu ku sheegay in Mareykanka uu haysto “sabab uu ku aamino” in ciidamada Ruushka “ay damacsan yihiin isla markaana ay doonayaan inay weeraraan Ukraine toddobaadka soo socda ama maalmaha nagu soo aadan”.
“Ilaa iyo hadda, waxaan rumeysanahay in Ruushka uu go’aankaas qaatay” ayuu Biden hadalkiisa sii raaciyay.
Biden wuxuu sidoo kale sheegay in Ruushka uu weli heysto waddo diblumaasiyadeed oo lagu qaboojin karo xaaladda si wadahadal loogu xalliyo xiisadda.
Shaley, waxaa soo baxayay astaamo kale markii hoggaamiyeyaasha madaxda kooxaha gooni u goosadka ay shaaciyeen in dadka ay ka daadgureynayaan halkaas xilli ay sheegeen in Ukraine ay bilowday inay duqeysay halkaas ayna qorsheyneyso weerarro, arrinta oo xiisadda sii hurisay.
Ukraine ayaa marar badan sheegtay in aysan qorsheyneynin wax weerar ah, wasiirka arrimaha dibadda Dmytro Kuleba ayaa meesha ka saaray waxa uu ku tilmaamay “warbixinnada been abuurka ah ee Ruushka”.
Boqollaal kun oo qof ayaa ku nool gobolkan, daadgureyntan waxay noqon kartaa mid ballaaran, mana jirto caddeymo muujinayaa in daadgureynta ay bilaabatay balse warbaahinta dowladda Ruushka ayaa sheegtay in dhowr bas oo soo daadgureeyay dadka deegaanka ay ku sii jeedeen Ruushka.
Xigashada Sawirka, Tass via Getty Images
Baabur ay leeyihiin militeriga oo lala eegtay qarax ka dhacay Donetsk
Kremlin wuxuu sheegay in madaxweyne Putin uu amar ku bixiyey xero qoxooti in dadkaasi looga diyaariyo deegaannada ku dhaw xadka Ukraine gargaar degdeg ahna dadkaasi lala gaaro.
Ruushka ayaa tani 2014-kii taageero u fidinayey jabhadda hubeysan ee ee dagaallama bariga Ukraine ee Donbas kadib dagaal dhiig badan ku daatay oo k adhacay halkaas,
Waxaana dagaalkaasi ku dhintay dad kor u dhaafayay 14,000 oo u badan dad rayad ah.
Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay dhacdooyinkii 48 saac ee la soo dhaafay dhacayey ay qayb ka yihiin dandaansiga been abuurka uu Ruushka wado, si uu baneysto weerarada gardarrada ah.
Sirdoonka Ukraine waxay xalay sheegeen iney heleen xog ku saabsan in waxyaabaha qarxa lagu xiray kaabayaasha dhaqaalaha ee ee ka jira Donetsk.
Khariirada bariga Ukraine
Dhanka kale, Madaxweynaha Ruushka Viladmir Putin ayaa sheegay in xaaladda bariga Ukraine ay ka sii dareyso.
Shir jaraa;id oo uu Jimcihi qabtay Putin wuxuu ka dhawaajiyay eedeymo ku saasban xadgudubyo dhanka xuquuqda aadanaha ah, takoor in lagula kacay dadka afka Ruushka ku hadlo ee ku nool Ukraine.
Wuxuuna saxaafadda u sheegay in uu diyaar u yahay in uu madaxda reer galbeedka kala hadlo xasaradaha ka taagan Ukraine, balse waxa uu ku eedeeyay in ay iska indho tireen walaaca amni ee Ruushka, waxa uuna ka digay in heshiis kasta uu ku jiro ballan qaad sharci ah oo ku aadan in gaashaanbuurta Nato ay joojin doonto isballaarinta ay ka waddo bariga Yurub.